बुढाथोक लघुजलविद्युत आयोजना ४ महिना यता अन्धकारमा : आयोजना पुन सञ्चालनमा ल्याउन ४० लाख बढी खर्च हुने ! – ebaglung.com
२०७४ मंसिर २६, मंगलवार २२:१९	थप समाचार, समाचार
ढोरपाटन, २०७४ मंसिर २६ । ४ महिना यता ढोरपाटन नगरपालिका—५ स्थित ६० किलोवाट क्षमताको बुढाथोक लघु जलविद्युत आयोजना अवरुद्ध हुँदा यहाँका स्थानीयहरु अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको छन् ।
गत साउन ३१ गते विद्युतको कुलो भत्किएर विद्युत सञ्चालनमा आउन नसक्दा ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ५ र निसीखोला गाउँपालिकाका केही गाउँहरु गरि ५५० घुरधुरीका बासिन्दाहरु अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका हुन । अहिले नगरपालिकाका प्याङखोला, मस्ति, घर्तिथोक, नाथुरी, बाहुनगाउँ लगायत निसीखोला गाउँपालिकाको स्थानीयहरु बिजुली बाल्न र विद्युतबाट चल्ने सामाग्रीहरु उपयोग गर्न पाएका छैनन् । साथै विजुलीबाट चल्ने कुटानी पिसानी मिल ठप्प हुँदा समेत समस्या परेको छ । यहाँका स्थानीयहरु लामो समययता रेडियो टेलिभिजनलगायत सञ्चारका माध्ययमहरुबाट समेत बञ्चित बनेका छन् । मोबाइल फोन चार्ज गर्न लामो दुरी तय गरेर छिमेकी आयोजनाका गाउँहरुमा जानुपरेको छ ।
गत बर्ष पनि बाढीले आयोजनाको मुहानमा क्षती पु¥याउँदा यहाँका स्थानीयहरु महिनौसम्म अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका थिए । यो बर्ष पनि आयोजनाको कुलोमा क्षती पु¥याएको थियो । आयोजना पुनसञ्चालनको लागि नगरपालिकाबाट रु ५ लाखको बजेट विनियोजन गरी स्थानीयहरुको श्रमदानबाट कुलो मर्मत समेत गरिएको थियो । तर मर्मतपछि पुनः सञ्चालन गर्दा कुलोमा झन ठूलो क्षती पुगेपछि आयोजना बन्द रहेको आयोजनाका अध्यक्ष नरेन्द्र कुँवरले बताउनुभयो ।
बैकल्पिक उर्जा केन्द्र, काठमाडौबाट ५७ लाख अनुदान र स्थानीयहरुको चन्दा तथा जनश्रमदान गरि २ करोड ४८ लाखको लागतमा वि.सं. २०६५ साल पौष मसान्तमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आएको आयोजनामा ठूलो क्षती पुगेपछि अहिले थप अनुदान पहलको लागि आफु वैकल्पिक उर्जा केन्द्रमा गएको अध्यक्ष कुँवरले बताउनुभयो ।
कुलो सञ्चालनको लागि करिव ७० मिटर पेनस्टिक पाइप राख्नैपर्ने भएपछि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट इन्जिनियर लिएर सर्भे समेत गरिएको वडा नं. ५ का अध्यक्ष लक्ष्मण पुनमगरले बताउनुभयो । पेनस्टिक पाइप, पानीको ड्याम पुर्नस्थापना लगायत कुलो मर्मत गरी आयोजनालाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन करिब ४० लाख लागत लाग्ने वडाअध्यक्ष पुनमगरले बताउनुभयो । तत्काल उर्जाबाट अनुदान आए यथासिघ्र काम सुरु गरि आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो ।
उक्त आयोजनाबाट अर्नाकोट डाँडामा रहेको एनसेल र स्काइको टावर र नाथुरीमा रहेको एनसेलको टावर सञ्चालनमा आएका थिए । अहिले ति टावरहरु जेनेरेटरको भरमा सञ्चालनमा आएको छन् । तिनवटा टावरले विद्यत खपत गरेबापत र स्थानीयको महसुलबाट आयोजनाले करिब ६० हजार आम्दानी गर्दै आएको थियो ।